Dr. Tint Swe's Writings: June 2017
• JUN 10TH, 5:43AM မင်္ဂလာဆရာကူညီတောင်းချင်းလိုပါ ၃လဆေးသမီး၅လပိုင်း၁၄ရက်ကပြည့်တာပါဆရာ ဆေးထိုးတာမတည့်ဘုဆရာ သွေးနည်းနည်းဆင်းတယ်ဆရာ အခုထိလည်းဆင်းနေတယ်ဆရာ ၃လဆေး အရှိန်က ဘယ်တော့မှာပြေတာလဲဆရာ သမီးမသိလိုပါဆရာ
• JUN 10TH, 10:54AM Dr. Tint မေးနည်းစည်းကမ်းပို့လိုက်။
• ကျားအသက် ၃၉ မအသက် ၂၂ အိမ်ထောင်အသက် ၅လ ၃လဆေးနဲ့မတည့်ပါဘု ၃လဆေးထိုးတာ ၅လပိုင်း ၁၄ရက်က ပြည့််တယ်အခု ရာသီကဆင်းနေတယ် ခလေးလဲယူချင်တယ် ၂လပိုင်း ၁၄ရက်က ၃လဆေးထိုးတာပါ
• Dr. Tint Swe မတည့်လို့တော့ မခေါ်။ တားဆေးထဲမှာ ဟော်မုန်းပါ။ ဟော်မုန်းက သက်ရောက်မှု မတူကြ။ ဖြစ်တတ်။ စောင့်ရင် ဟော်မုန်း မူမှန်ပြန်ဖြစ်မယ်။
• ခလေးဘယ်တော့ရနိုင် ၃လဆေးပြည့်ပီ အခုသွေးနည်းနည်းဆင်းနေတယ် ဘယ်လောက်ကြာမလဲ
• JUN 10TH, 12:25PM ဆရာက မသိနိုင်။ တဦးချင်းကို စမ်းသပ် + စစ်ဆေးရ။ ဆရာ့ဘလော့မှာ ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်။
• JUN 10TH, 11:39PM ဆရာနဲ့ပြမယ်ဆိုပြလိုရလား ဘယ်မှာထိုင်လဲ
• JUN 11TH, 12:40AM Dr. Tint မေးနည်းစည်းကမ်းပို့လိုက်။
• JUN 11TH, 1:41AM နာမလည် ဖြစ်တာပြောပြတာ အားကုန်ပါ
• JUN 11TH, 7:58PM မေးနည်းစည်းကမ်း ဖတ်ပါသလား။ အသက်-ကျား-မ-ဘာဖြစ်နေ-ဘာဖြစ်ချင် မသိတာကို ဖြေမရပါ။
• JUN 12TH, 12:24AM ကျားအသက် ၃၉ မ အသက်က ၂၂ ခေါင်းမူးတယ် ဆီးခဏခဏသွားတယ် အိပ်မပျော်ဘူး ဆီးစပ်ကနာတယ် ထမင်းမစားချင်း ရာသီကကနည်းနည်းလာပီ အခုရာသီမလာဘု
• Dr. Tint Swe ဖြစ်တာ ကျားလား မ လား မသိ။
• JUN 13TH, 3:58AM မဖြစ်တာပါ မ ပါ
• JUN 13TH, 11:00PM မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့ထားပြီး။ အချက်အလက်စုံ မပြောလိုသူများ မေးနည်းထဲပါ ဘလော့မှာ ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်။
• (၁) မ အသက် ၂၂ ၃လဆေးထိုးတာ၁လပြည့်ပီ (၂) အခုရာသီလာတယ် (၃) ၃လဆေးပြယ်ပီလား
• JUN 14TH, 12:49AM ဖြေပေးပါ
• JUN 14TH, 8:43PM Depo Provera သုံးလခံ ကိုယ်ဝန်တားထိုးဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/depo-provera.html
• JUN 15TH, 5:50AM ခလေးယူမလိုပါ မထိုးဘု
• JUN 15TH, 9:46PM မေးတာကို နားမလည်။ ဆောရီး။
• ခေါင်းမူးနေတယ် အန်ချင်တယ် မအန်ဘု ဒီနက်ကဆီးစစ်တယ် တချောင်ဘဲပေါ်တယ်ဘဖြစ်တာလ နေလိုထိုင်မကောင်းဘု ကိုယ်ကို ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို ခံစားမိတယ်
• JUN 18TH, 7:41AM ဆရာဝန်ကပြောတယ်ရေအိတ်ရှိတယ် စိုးရိမ်ရလား ခလေးရောရနိုင်လား ရေအိတ်က ဘယ်ကနေစဖြစ်တာလဲ
• JUN 18TH, 2:39PM ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။
• JUN 19TH, 4:27AM ဆရာဝန်ကိုပြတော့ ဗိုက်ထဲမှာ ရေအိတ်သေးသေးလေးတွေရှိတယ် စိုးရိမ်ရလား ဆေးသောက်တာ မသာသာဘု ဗိုက်အောင့်ရင်ဗိုက်ကကြီးလာတယ် ဗိုက်ကမအောင့်ရင် ဗိုက်ကချပ်သွားတယ် ဘဖြစ်တာလဲ
• JUN 19TH, 8:46PM ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။
• JUN 20TH, 12:07AM နာမလည်ပါ မသိ
• JUN 23RD, 2:48AM သားအိမ်ရောင်တာ ကလေးရောရပါမလား ရေအိတ်သေး၂လေးတွေလဲရှိတယ် အကြံပေးပါ
• JUN 23RD, 1:39PM ဆေးစစ်ချက်စာ (ပုံမဟုတ်) မသိ။
• JUN 24TH, 12:37AM သာအိမ်ရောင်တာဘာရှောင်ရလဲ ဘာစားသင့်လဲ ရေအိတ်သေးသေးလေးတွေလဲ ရှိတယ်လို ဆရာမကပြောတယ် ကလေးရနိုင်မလား
• SAT 1:34PM မေးနည်းစည်းကမ်းကို ဖတ်ပါရန်။ စည်းကမ်းအတိုင်း မမေးလိုက တခြားဆရာဝန်ကို မေးပါရန်။
• SUN 5:12AM မလိုမေးရ
• FRI 11:27PM သားအိမ်ရောင်တာဆေးသောက်တာသက်သာပါတယ် အခုရာသီမမှန်သေးဘူးဖြစ်လို ရာသီမမှန်တာလဲ ဖြေပေးပါ
မေးခဲ့တာ ဖြေခဲ့တာတွေအကုန် အစကနေပြန်ဖတ်တယ်။
1. ၃ လခံထိုးဆေးမေးတယ်။
2. နောက် ကလေးရနိုင်လား၊ လိုချင်တယ်ပြောလာတယ်။
3. နောက် ၃ လခံထိုးဆေးထပ်မေးတယ်။
4. နောက် မထိုးဘူး ပြောတယ်။
5. နောက် ရေအိတ်ရှိတယ် ပြောတယ်။
6. နောက် သားအိမ်ရောင်တာ မေးတယ်။
ဘာဖြေရမလဲ မသိတော့ပါ။ ဆောရီးဗျာ။
ည (မနက်) ၂ နာရီ၊ ၃ မိနစ်။
စောစောကပဲ ကရုဏာနဲ့ သဒ္ဓါ သတ်ပုံတွေပြင်ပေးရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြေးအကြီးဆုံးနာမည်က သဒ္ဓါတင့်ဆွေ။ သူက အဖိုးအဖွားလက်ပေါ်မှာသာ ကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဒေလီယူနီဗာစီတီက ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရအောင် သင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့အရင် သူက ယူအက်စ်အေကို သွားရတယ်။ အဖိုးအဖွားလှောင်အိမ်က ထွက်တော့တဲ့သဘော။
ဒီကိုရောက်တော့ သူလည်း အတောင်ပေါက်ပြီ။ မကြာခင် ကလေးအမေဖြစ်တော့မယ်။ ကနေ့ သူ့ဖွားကို ဈေးတွေလိုက်ပို့ ဝယ်ခြမ်းပေးတယ်။ မိခင်စိတ်ဆိုတာ နားလည်းစပြုလာတာဖြစ်မယ်။ စာနာစိတ်ဆိုတာ စာဖတ်တာနဲ့မရ။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်တိုင်တွေ့လာမှ သိနားလည်းလာကြတယ်။ ကြီးတဲ့သူတွေလည်း ငယ်စဉ်ရွယ်စဉ်က အဲလိုပါပဲ။ ကြာလေလေ သူတပါးကျေးဇူးကို သိတတ်လာကြလေလေ။
မသဒ္ဓါ မြန်မာစာ မဖတ်တတ်ပါ။ စကားတော့ ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်။ ဟင်ဒီစကားနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလည်း ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်။ ကိုးတန်းကျောင်းသူဘဝမှာ ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်ထူကြီးတွေ ဖတ်နေပြီ။
ည ၁ နာရီ၊ ၂၁ မိနစ်။
ကျပ် သိန်း ၁ သောင်းတဲ့။
ကံကောင်းတဲ့သူ ကျပ် သိန်းတသောင်းတိတိ ရပါစေ။
ည ဝဝ နာရီ၊ ၁၂ မိနစ်။
ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့ဟာ ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ တောထွက်ပြီးနောက် ခြောက်နှစ်ကြာမှာ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်ကိုရရှိပြီး ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူတာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။
အဖန်တစ်လဲလဲ မဟုတ်ပါ။ စာဖတ်သူများ သံသရာမှာ အဖန်တလဲလဲ တစ်မနေကြစေဘို့ ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်။
ည ၁၁ နာရီ၊ ၃၂ မိနစ်။
မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းမှာ တထောင့်သုံးရာပြည့်အရေးတော်ပုံဟူသောသတ်ပုံနှင့် သန်းတရာဟူသောသတ်ပုံများ အထင်အရှားရှိခဲ့ပေသည်။
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် တစ်ထောင့်နှင့် တစ်ရာသတ်ပုံများ ခေတ်စားနေသည်။
သမိုင်းမသိသူ အ၏။ သို့သော် သူတို့သည် လူလည်လုပ်နေကြ၏။
ပညာပေးသူတွေက Disabled မသန်မစွမ်းသူကိုလဲ Differently abled တမူထူးခြား သန်စွမ်းသူများလို့ ပြောတယ်။ ဆရာဝန်တွေကလည်း ရောဂါနာမည်ကို လူတိုင်းမသိအောင် ကြံဖန်ပြောရတာမျိုးလဲရှိတယ်။ ဥပမာ TB တီဘီ ကို Koch’s ကော့ခ် လို့ပြောရတယ်။
ရှေးအခေါ်တွေကနေ ပြောင်းလာတာတွေ ရှိတယ်။
• Bad Blood သွေးဆိုး = Syphilis ဆစ်ဖလစ်၊
• French pox ပြင်သစ်ကျောက် Syphilis ဆစ်ဖလစ်၊
• Great pox မဟာကျောက် = Syphilis ဆစ်ဖလစ်၊
• Enteric fever အင်းတရစ် အဖျား = Typhoid fever တိုက်ဖွိုက်၊
• Hydrophobia ရေကြောက် = Rabies ရေးဘီးစ် (ခွေးရူး)၊
• Infantile paralysis သူငယ်နာ အကြောသေ = Polio ပိုလီယို၊
• Nostalgia အတိတ်စွဲ = Homesickness အိမ်အလွမ်း၊
• Rubeola ရူဘဲလား = German measles ဂျာမန်ဝက်သက်၊
• Ship fever သင်္ဘောဖျား = Typhus တိုက်ဖတ်စ်၊
• Jail fever ထောင်ဖျား = Typhus တိုက်ဖတ်စ်၊
• Winter fever ဆောင်းဖျား = Pneumonia နူမိုးနီးယား၊
ပြောင်းလာတာက ပိုဆိုးနေတာလဲ တွေ့ရတယ်။
• Elephantiasis ဆင်ခြေထောက် = A form of leprosy လက်ပရိုစီတမျိုး၊
• Mania မင်းနီးယား = Insanity အရူး၊
Insanity စိတ်ရောဂါသည်ကို Craziness or Madness စသဖြင့်ခေါ်တယ်။ တရာရုံးတွေမှာတော့ Personality disorder လို့သုံးတယ်။ Foolish ရူးရုးမိုက်မိုက်လုပ်တာ၊ Unreasonable ကျိုးကြောင်းမဆီလျှော်လုပ်တာကိုပြောတာ ဖြစ်တယ်။
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ၊ ဒုလ္လဘဒေသနာ၊ ပဉ္စတွဲ၊ စာမျက်နှာ ၁၇၁ = တကယ်အားကိုးလောက်တဲ့ ရတနာစစ်ကိုရအောင့့်
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ၊ ဒုလ္လဘဒေသနာ၊ ပဉ္စတွဲ၊ စာမျက်နှာ ၁၇၂ = ကုရုတိုင်း တတိုင်းလုံးမှာရှိကြတဲ့့
ဆရာတော်ကြီးကို ကာပြန်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဒကာတွေကတော့ တစ်လုပ်ပြီး ဆရာတော့်စာတွေကို ပြန်ရေးနေကြတယ်။
• တခါတခေါက်၊ အလည်ရောက်အောင်လာခဲ့ကွယ်။ အေးအေးမွန် (တလိုင်း)
• တသက်မှတ်ကြပါ။ သမီးဇံ (ရာမည - မော)
တစ်ခါတစ်ခေါက် မဟုတ်ပါ။ တစ်နေ့သင်ရ မဟုတ်ပါ။ တစ်သက်မှတ်ကြပါ မဟုတ်ပါ။ ကဗျာရေးတဲ့ ကျောင်းသူတွေဟာ ကလောင်နာမည်တွေအရ တိုင်းရင်းသူလေးတွေဖြစ်ကြတယ်။ ရွှေဗမာတွေ၊ ရွှေဆရာကြီးတွေ၊ ရွှေစာရေးဆရာတွေ၊ ရွှေကဗျာဆရာတွေ၊ ရွှေအယ်ဒီတာတွေ သိကြစေချင်တယ်။
အရင်ကထုတ်တဲ့ စာအုပ်မှာ စောစောထ သွားတိုက် မျက်နှာသစ် အိပ်ယာသိမ်း။ အစိုးရကပြောင်းခိုင်းလို့ အိပ်ယာကို အိပ်ရာလို့ရေးလာကြတယ်။ မှန်ပါမလား စဉ်းစားနေတယ်။
အခုထုတ် စာအုပ်မှာ က ကလေးငယ်ချစ်စဖွယ် ခ ခရေကုံး မလေးပြုံး ဂ ဂဏန်းသင် ပြုံးရွှင်ရွှင်။ သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ မကျေသူတွေက ကလေးကို ခလေးလို့ရေးကြတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီကို တနေ့ မှာ ၉-၁ဝ ယောက်က အဲလိုရေးမေးကြတယ်။
သူငယ်တန်းဖတ်စာ စာမျက်နှာ (၁၂) မှာ ရွာလူကြီးများ ကြွလာပြီလို့ ပါပေမယ့် ပြီကို ပီလို့ ရေးနေကြတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီကို တနေ့ မှာ ၇-၈ ယောက်က အဲလိုရေးမေးကြတယ်။
အခုထုတ်သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ ကြင်ရာလို့သာရေးထားတယ်။ ရွှေတိုင်ညွန့်ရေးတဲ့ ကြင်ယာတော်သီချင်းရှိတယ်။ မြတ်စွာဘုရား၏ကြင်ယာတော် = ယသော်ဓရာလို့ရေးထားတာလည်းရှိတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁၂)၊ စာမျက်နှာ (၆၅) မှာ လူဝီဘုရင်များ အကြောင်းထဲမှာ ပဌမကြင်ယာတော်ဖြစ်သူ ဂျုံးမင်းသမီးကို ကွာရှင်း၍ ဆဋ္ဌမချားဘုရင်၏ ကျန်ရစ်ခဲ့သော ကြင်ယာတော် အန်းနှင့်လက်ထပ်သည်လို့ရေးထားတယ်။
၁၉၄၇ ဇူလိုင် (၁၉) ရက်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံကြရ။ လုပ်ကြံသူများ = ဦးစောနှင့် အပေါင်းပါများ = နိုင်ငံရေးအတွက် အစွန်းရောက်ခြင်း။
၁၉၆၂ ဇူလိုင် (၇) ရက်နေ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ပဌမဆုံးသတ်ဖြတ်။ ၁၉၆၂ ဇူလိုင် (၈) ရက်နေ့ သမိုင်းဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီး။ သတ်ဖြတ်၊ ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးသူ = တော်လှန်ရေးကောင်စီ = အာဏာအတွက် အစွန်းရောက်ခြင်း။
၂ဝ၁၃ ဇူလိုင် (၇) ရက်နေ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ဗုံးတွေပေါက်ကွဲ။ ဖေါက်ခွဲသူ = မွတ်ဆလင်အစွန်းရောက်များ = ဘာသာရေးအတွက် အစွန်းရောက်ခြင်း။
ကလေးကဗျာ ကြည့်စရာတင်တော့ အတော်များများက စိတ်ဝင်စာကြတာတွေ့ရတယ်။ သတ်ပုံကိုပါ သတိထားသူလည်း ရှိတယ်။ ကောင်းတယ်။ မေးကြသေးတယ်။ ဘားနဲ့ ဖား။ တကောင်နဲ့ တလုံး။
အဲဒီကဗျာတွေက လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းက ရေးထားတာတွေဖြစ်တယ်။ ဘားလို့ ရေးထားတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နိုင်ငံရေးမှာ စားဖါးဆိုတဲ့အသုံး ရှိလာတယ်။ တကောင်ကို တစ်ကောင်လုပ်တာက ၁၉၈၁ နောက်မှာ။
သတ်ပုံစာလေးတွေရေးတာ တရာ (တစ်ရာ မဟုတ်) လောက်ရှိပြီထင်တယ်။ အကိုးအကားတွေကို ပုံနဲ့ပြပါတယ်။ မှန်တယ် မှားတယ်လို့ ဒိုင်လူကြီး မလုပ်ပါ။ အဟောင်းတွေကက အကုန်မှန်၊ အသစ်တွေမှားလို့လည်း ကောက်ချက်မချပါ။ ဥပမာ အကောင်းစားတွေရှိတယ်။
စာနဲ့ စကား ပြောင်းလဲတာတွေက ခေတ်တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ပြောင်းတယ်ဆိုတာ ပိုပြီးလွယ်ကူရှင်းလင်းအောင် ပါဠိတွေ၊ သက္ကတတွေ၊ ထပ်ဆင့်တွေနည်းလာတာက သင့်မြတ်တယ်။ မိုဃ်း၊ ၍့၊ ၏့၊ ကျမ္မာ၊ စွဲး၊ စဲး၊ ထဲး၊ ဆြာ၊ မင်းသ္မီး၊ မဲးဇာ၊ မှု့၊ ယ္ခင်၊ မြမ္မာ၊ သ္ခင်၊ သဲး၊ ဥူး၊ ဧး၊ စတာတွေကို မသုံးကြတော့ပါ။ စွယ်စုံကျမ်းထဲပါ စာလုံးပေါင်းတချို့ကိုလည်း ပြောင်းရေးလာကြတယ်။ ဂျူးလယပ်ဆီဇာ၊ ဆအူးဒီအာရေဗျ၊ ကွန်မျူနစ်၊ စသည်။ ထင်းမီးအစား လျှပ်စစ်နဲ့ ဓါတ်ငွေ့ သုံးလာတာ ကောင်းတယ်။
၁။ ဆရာမင်္ဂလာပါ။ မြန်မာစာ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောပြနေလို့ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ တွေ့နေရတာ ပျက်ချော်ချော် များရေးနေတာလား၊ တကယ်မတတ်တာလား၊ ဝေခွဲမရပါဘဲ မြန်မာလူမျိုး မြန်မာစာမရေးတတ်ဘူးဆိုရင် ရှက်စရာကောင်းနေတာ။ ပညာမဲ့စာမတတ်တာတွေများနေတာလား၊ သို့လောသို့လောနှင့် ဝမ်းနည်းနေမိပါတယ်။ ဆရာ ရေးပြရှင်းပြလို့ ကျေးဇူးတင်နေရပါသည်။
၂။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေက မြန်မာစကားကို ပြောင်သလို ပျက်သလိုနဲ့ တလွဲတွေ ပြောဆိုရေးသားရင်း အမှားက အမှန်ဖြစ်ကာ မြန်မာစာ မြန်မာစကားပျက်မှာ မြင်ယောင် စိုးရိမ်မိနေတယ် ဆရာရေ။
ကျွန်တော်လည်း မြန်မာ (ဗမာ) စကားကို ပြည်တွင်းမှာနေသလို မပြောရတာ (၂၇) နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရောက်ကတည်းက စကားကိုချပြောနေရတာ။ မိသားစုအတွင်းသာ အရင်ကလို ပြောလို့ရတယ်။ အဲတော့ သူများတွေဆီက သင်သူနိုင်တာ မရှိသလောက်နည်းတော့ ကျွန်တော့စကား တိုးတက်ရှင်သန်မှု ရပ်တန့်သွားတော့တယ်။
လူတွေကြားဆက်သွယ်မှုဟာ စကားဖြစ်တယ်။ စကားမှန်ကန်မှသာ လိုရာရောက်တယ်။ တချို့အကြောင်းအရာနဲ့ ဘာသာရပ်တွေမှာ စကားနဲ့စာ တိကျမှသာ အဲဒီသုတနဲ့ ပညာတတ်တယ်။ အထွေထွေသိပ္ပံကို ငါးတန်းအထိ နေဘူးသူတိုင်း သင်ကြရတယ်။ စကားစု၊ ဝေါဟာရတွေ တသွေမတိမ်းမှတ်ယူရတာမျိုးရှိတာ သိကြမယ်။
အရပ်ထဲမှာတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောကြတာများပါတယ်။ စကားတခွန်းကို တယောက်ဆီကနေ တယောက် လက်ပြောင်းတာနဲ့ အစက တိတိကျကျသိမထားတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ တဆင့်ဆိုတမျိုး ကွဲလွဲနိုင်တယ်။ ခလုတ်တိုက်၊ တရုတ်ရိုက်၊ ဖါးပြုပ်ကိုက်။
စာက အခြေခံကျတယ်။ ပညာရေးကို အလေးမထားတာနဲ့ တန်ဖိုးချရာကနေ စကားလည်း မလေးနက်၊ ပေါ့ပျက်ပျက်နဲ့ အလွယ်လိုက်ပြောကြတယ်။ ခေတ်စကား၊ ဘန်းစကားတွေက ခေတ်တိုင်းမှာရှိတာမို့ ပြောစရာမရှိပါ။ ရိုးရိုးတန်းတန်း ပြောတာမှာ ထင်တာကိုသာပြောကြတယ်။ ကြားတဲ့သူလည်း ရမ်းသန်းမှန်းယူလိုက်တယ်။ ကြာတော့ စကားအဓိပ္ပါယ် ဖေါ်မရတာတွေ အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေကိုသာ အဟုတ်မှတ်လာကြတယ်။ အဲလိုလူတွေ များများလာတဲ့အခါ စာတန်ဖိုး၊ စကားတန်ဖိုး၊ လူမျိုးတန်ဖိုး ကျတယ်။
ငယ်ငယ်ကဆိုရင် စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး အရေးအသားနဲ့သတ်ပုံ လေ့လာခဲ့ရတယ်။ သတ်ပုံမှန်နဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေ မဖတ်ရတော့တဲ့ကျွန်တော် ခုနေမှာ ကနေ့ထုတ်စာအုပ်တွေသာ ဖတ်ရရင့့်
ငယ်ငယ်ကဆိုရင် လူကြီးတွေစကားပြောတာနားထောင်ပြီး မှတ်သားခဲ့ရတယ်။ စကားအရာ လေ့လာသင်ယူမှု နည်းနေတဲ့ ကျွန်တော် ခုနေမှာ ပြည်တွင်းကလူတွေနဲ့သာ စကားပြောရရင့့်
ကနေ့ဟာ စာသင်နှစ် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်တလလုံး ကျောင်းပိတ်ပြီး သြဂုတ်လဆန်း (၃) ရက်မှာ နောက် စာသင်နှစ်သစ်စမယ်။
ဒီနှစ်တက်ထားသူတွေထဲက စာလိုက်သူတွေက နောက်လဲ အခန်းပြောင်းကြရတယ်။ လူသစ်တွေလာကြမယ်။ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်လာကြတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့ မရာချင်းကျောင်းသားလည်း အတန်းတက်မယ်။
မြန်မာပြည်က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ လျှောက်လွှာတင်ထားကြပြီးပြီ။ နောက်အပတ်ထဲမှာ ကျောင်းသားသစ်တွေ ဝင်ခွင့်ကိစ္စ ဘာသာပြန် စကားပြန်လုပ်ပေးဘို့တော့လာရဦးမယ်။
Photo by Phei Pheitisi
- National Blueberry Month ဘလူးဘယ်ရီ၊
- National Ice Cream Month အိုက်စ်ခရင်မ်၊
- National Hot Dog Month ဟော့ဒေ့ါ၊
၂ဝ၁၇ နှစ် ဇူလိုင်လဟာ မြန်မာလို ၁၃၇၉ ခုနှစ် ဝါဆိုလဆန်း (၈) ရက်ကနေ ဝါခေါင်လဆန်း (၈) ရက်နေ့အထိ ဖြစ်တယ်။ ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့ဟာ ဓမ္မစကြာနေ့ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် မုတ်သုန်ဥတုရှိရာဒေသတွေမှာ မုတ်သုန်မိုး ဖြိုင်ဖြိုင်ရွာတယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဇူလိုင်လရဲ့ကျောက်မျက်ရတနာဟာ ပတ္တမြားဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ နီရဲတာတူပေမယ့် သွေးဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဇူလိုင်လရောက်ရင် မုတ်သုန်မိုးနဲ့အတူ သွေးမြေကျတယ်။ ၁၉၆၂ ဇူလိုင် (၇) ရက်မှာ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကြောင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေ ၁၉၄၇ ဇူလိုင် (၁၉) ရက်မှာ သွေးမြေကျခဲ့တယ်။
အခုလေးတင် ဆေးကျောင်းသူငယ်ချင်း ဆရာဝန်မတယောက်က အင်္ဂလိပ်လို ဆိုဆုံးမစာတခု တင်တယ်။ အောင်မြင်သူဆိုတာတဲ့ ဖေါင်ဒေးရှင်းကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့သူတဲ့။ အဲဒီအုတ်ခဲတွေကလည်း သူ့ကို သူများတွေက ပစ်လိုက်တာတွေတဲ့။
ဟုတ်တယ် သူငယ်ချင်း။ ဒါပေမဲ့ ထုတဲ့ခဲက တခါတလေခေါင်းထိတယ်။ ဒါလည်းမမှုပါ။ ကိုယ်က ကြက်ခြေနီလေးဘာလေး တတ်ထားတော့ မထောင်းတာဘူးပေါ့လို့ ပြန်ရေးလိုက်တယ်။ Smile!
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = Corn ငါးမျက်စိ
ကွန်မင့်တခု = Mon Lay ညီမလည်းဖြစ်ဖူးပါတယ် မရိုးပင်ရဲ့အစေးကို ၁ပတ်လောက်လိမ်းပါ သေချာပေါက် ပျောက်ကင်းပါတယ် မလိမ်းခင်တော့ အဲနေရာကို ရေနဲ့သေချာဆေးပါ ပြီးမှလိမ်းပါ
Tint Swe အရပ်နည်းတွေ မိမိနေရာမှာသာ ရေးပါရန်လို့ ခဏခဏ (ခဏခဏ) ပြောပါတယ်။ ခဏနေရင် ကွန်မင့်ကို ဖျက်ပါမယ်။ ဆောရီး။
ကွန်မင့်တခု = Htut Myat Khant ရွာအခေါ်ဆပ်ပြာသိလျှင် အဆင်ပြေ၏။မီးခြစ်ဆံခေါင်းမျှ သွေးထွက်အောင်လုပ်ပြီးလိမ်းပါ ထုံးနှင့်ေ ရာ၍သာ
Dr. Tint Swe အရပ်နည်းတွေ မိမိနေရာမှာသာ ရေးပါရန်လို့ ခဏခဏ (ခဏခဏ) ပြောပါတယ်။ ခဏနေရင် ကွန်မင့်ကို ဖျက်ပါမယ်။ ဆောရီး။
ကျွန်တော်လည်း သူများနေရာမှာ ကျွန်တော့်ဆေးနည်း မပေးပါ။
သည်ချောင်းမှာ အမည်မွှေး အေးငြိမ့်သာယာ။
မွှေးသမျှ ပြန်တရာ ခံစရာအရေး
ရိုးသံရှင် ပဲ့တင်ထပ် ချောင်းရပ်ဧရာ။
စုန်ဆန်ရ လမ်းတကာမှာ လမ်းမ,သာရှာကြ။
ပို့စ်တွေထဲမှာ သတင်းပါတယ်၊ အတင်းပါတယ်။ တရားပါတယ်၊ မတရားပါတယ်။ စာပါတယ်၊ ကဗျာပါတယ်။ ဖတ်ပါတယ်။ မျက်စိကလည်း သတ်ပုံမှားတာ မျက်မှန်မပါပဲ ထင်းကနည်းမြင်တယ်။ လူချင်းမင်မင်တဲ့ ကဗျာဆရာတယောက် သူ့ကဗျာ တင်တယ်။ နှစ်ခါလုံးမှာ တစ်တွေနဲ့ရေးထားတယ်။ တခြားမသိတဲ့ကဗျာတွေဖတ်တိုင်း တစ်နေတယ်။
ဇော်ဂျီတို့ မင်းသုဝဏ်တို့ တင်မိုးတို့ထက်သာတဲ့ တစ်ဖြစ်ချင်ကြသူတွေ။
ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ တွေးမိပါစကဗျာကို ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ဘူတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဗေဒါလိုဘဝ လျှောက်ခဲ့ရပါလားလို့ တွေးမိလာတယ်။
• ကျွန်တော်တို့ ဆေးကျောင်းသားဘဝ ပညာတွင်းကနက်လှ၊
• ဆေးစာအုပ်ကရှား လက်ဆင့်ကမ်းပေးသူအနားရှိမှ ဖတ်စရာရ၊
• ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်ဖြစ်စ ဆေးကုတွင်းကနက်လှ၊
• အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ အစိုးရမဟုတ်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးတွင်းကနက်လှ။
• မြင်းမြီးကိုသာ လက်ဆောင်ရ၊ ချုပ်ရတဲ့ ကက်ဂတ် ခေါ်တဲ့ကြိုးက မရှိ၊
• ခွဲစိတ်ကရိယာ ဗလာနတ္ထိ၊ ခွဲစိတ်လူက အပြည့်၊
• ဆရာဝန်ခင်မြာ ကြံမိကြံရာ၊ ဆေးကျောင်းမှာမသင်ရတာ နည်းလမ်းရှာ၊
• ဘာရမလဲ၊ ပညာလဲရ၊ တာဝန်လဲကျေ၊ တောသူတောသားတွေ အတန်အသင့် ကျန်းမာကြပါစေ။
• မန္တလေးဈေးချိုရောက် အခေါက်တိုင်းဝယ်၊
• စီရုံကဆေးဆိုင်မယ် ကုန်သွယ်ရေးလို တန်းစီစရာမလို၊
• ကြိုက်တဲ့နံပါတ်ကို ကြိုက်သလောက်ဝယ်လို့ရ၊
• မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကြီးက အောင်မြင်လှ။
• သွေးထုတ်တဲ့ပိုက်ကကုန်၊ ၂၁ မိုင်ဝေးတဲ့ တံ့တားဦးဆေးရုံ၊ လူကြုံနဲ့လှမ်းချေး၊
• သွေးစစ်စရာ မိုက်ကရိုစကုပ်ဆိုတာမရှိ၊ နေရောင်ထောင်ကြည့်၊
• အာလ်ထွာဆောင်း မသိ၊ ဓါတ်မှန် မရှိ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းက ဝေးလှပါဘိ။
• တောဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ကိရိယာဆိုတာ ဝေလာဝေး၊
• ရန်ကုန်ကို ဆင်းပြေး၊ လဟာပြင်ဈေးမှာ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေး၊
• ကစ်ဒနီထွေး၊ ညှပ်သေးသေး၊ ကပ်ကြေး၊
• ဈေးမဆစ်နဲ့ ပေးသာပေး၊ တောသားတွေကျန်းမာရေးအတွက် သယ်လာလို့မလေး။
• မေ့ဆေးဆိုတာ အီသာ၊ အလွန်တရာနံပါလှ၊
• ဆေးရုံမှာခွဲစိတ်နေတာ အိမ်ကဆရာဝန်ကတော်ကအနံ့ရ၊
• အီသာကိုလဲ အပြင်မှာဝယ်၊ ဈေးချိုတော်ကျေးဇူး ကြီးမားတယ်။
• ဆေးပြား၊ ဆေးဝါး၊ အလွန်ရှား၊
• အားကိုးစရာ ထိုင်းကလာ၊ တရုပ်ကလာ၊ မိုးရေးကလာ၊
• အတုတွေထဲမှာ နည်းနည်းသင့်လောက်တာရွေးရတာက ပညာ၊
• ဝေဒနာကို စေတနာနဲ့သာကုပေးရ၊ ခုချိန်ကျမှ တောင်းပန်ပါရ။
• ဟောက်ဆာဂျင်ဘဝ၊ စစ်ဆေးရုံမှာတာဝန်ကျ၊
• တခါမှမမြင်ဘူး ဗူးခွံလှလှနဲ့ နိုင်ငံခြားကဆေး၊ ပေါသလေားမမေးနဲ့၊
• အရပ်သားလေးတွေမှာ ဘီပီအိုင်ဆေးတောင်မှ မလောက်င၊
• မင်္ဂလာလမ်းကဆေးဂိုဒေါင်မှာ ခင်အောင်မင်အောင်ပေါင်းထားမှ မြွေဆေးကအစ နည်းနည်းပါးပါးပိုလို့ရ။
• ခုခေတ်မှာပြောင်းလဲလာ၊ ငွေကလွဲလို့ ဘာမှမရှား၊
• ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံသွား၊ နိုင်ငံခြားသွား၊
• စစ်ဆေးရုံတွေကတော့ ရာသက်ပန် အပျံစား။
• စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးအပြောင်းအလဲလမ်းမှာ
• ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော ကျန်းမာရေးမှသည့့်
• လွယ်ကူကြမ်းတမ်းသော ကျန်းမာရေးဆီသို့ ချီတက်နေပါပြီ။
အော့့် အခုမှ ဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော်က ခုခေတ်သမားမဟုတ်လို့ ရေးမကောင်း။ ကျွန်တော်က မဆလ ခေတ်က မြို့သာမှာ တိုက်နယ်ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်။ မန္တလေး မင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့ ဆေးသိုလှောင်ရုံကို ဆေးသွားသွားထုတ်ရတယ်။ တောင်းတာ မရပါ။ ရှိတာရတယ်။ ခွဲတမ်းနဲ့သာရတယ်။ ဘီပီအိုင်ထုတ်ဆေးတွေသာရတယ်။ မေမြို့စစ်ဆေးရုံမှာ အလုပ်သင်ဆရာဝန် လုပ်ရတော့ မမြင်ဘူးတဲ့ဆေးတွေတွေ့ရတယ်။ တိုက်နယ်ဆရာဝန်မှာတော့ အရေးပေါ် သွေးထုတ်စရာ ဒိုနာဆက်ကို မိုင် ၂ဝ ဝေးတဲ့ တံတားဦးဆေးရုံလူလွှတ် ချေးငှားရတယ်။ ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) သက်သေရှိတယ်။ မြို့သာနယ်မှာ မြွေကလည်းပေါလွန်းလို့ ဆေးဂိုဒေါင်ကလူတွေနဲ့ ခင်အောင်မင်အောင် လုပ်ထားရတယ်။ ခုခေတ်ကို မသိပါ။ ဆောရီးပဲ ခေတ်သစ် တိုက်နယ်ဆရာဝန်တို့ရေ။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က စစ်ဗိုလ်ဖြစ်ဖို့ သွားဖြေရတာက စစ်တက္ကသိုလ် DSA 11 ဖြစ်တယ်။ အတူဖြေသူတွေထဲက အမျိုးတယောက် (သည်စာရေးတုံး အမျိုးတော်မှန်းမသိသေးပါ) အောင်ပြီး ပါသွားတယ်။ နောင်တော့ သူဟာ ဝန်ကြီးအစစ် ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်က ပြည်ပအစိုးရမှာတော့ ဝန်ကြီးလို့ အခေါ်ခံရသူဖြစ်လာတယ်။ သူက အတော့်ကို စစ်ထဲဝင်ချင်တဲ့လူ၊ အရင်နှစ်ကလည်းသွားဖြေတာ ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်လို့တဲ့ မပါဘူး။ နောက်နှစ်တော့ ဦးလေး တယောက်ကပေးတဲ့ အလေးချိန်ပြည့်တဲ့နည်း တွေ့သွားလေရဲ့။
စစ်ဗိုလ်ဆရာဝန် မလုပ်ချင်တဲ့ဆိုတာက ဒီလို။ မေမြို့စစ်ဆေးရုံမှာ ဟောက်စ် လုပ်တဲ့သူထဲကနေ စစ်မှုထမ်းဥပေးဒအရ သုံးနှစ်စစ်ထဲဝင်လုပ်ဘို့ ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်က မလုပ်ချင်ပါ။ စစ်တပ်ကို မုန်းတာလည်းမဟုတ်။ ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်ကျနေပြီ။ ဟိုသွားသည်သွား မသွားချင်။ အဓိကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ နေချင်တာ။
ကျွန်တော်မွေးတဲ့ မင်းရွာက ကသေးသေးလေး။ အဲဒီတုံးက အိမ်ခြေ ၈ဝ လောက်ပဲရှိမယ်။ တောင်ယမားလို့ခေါ်တဲ့ မိုးရာသီ မိုးသည်းမှ ရေရှိတဲ့ သဲချောင်းကမ်းမှာရှိတယ်။ ချောင်းဘေး၊ မြေနိမ့်လို့ ရွာထဲမှာ သုံးတောင်၊ ငါးပေလောက်တူးရင် ရေထွက်ပြီ။ ရေကလဲ ကောင်းလိုက်တာမှ။ အေးလို့၊ ကြည်လို့။ အိမ်တိုင်းမှာ ခြံရှေ့နားတတွင်း၊ သစ်ပင်ရေလောင်းဘို့ ခြံနောက်မှာ တတွင်း၊ ရေတွင်းနှစ်တွင်းတော့ ရှိကြတာချည်းဘဲ။
အဲလို ရေကောင်းလွန်း၊ ရေပေါလွန်းလှတဲ့ မင်းရွာသားတယောက် နောင်နှစ်အစိတ်လောက်ကြာတော့ ငါန်းဇွန်သား လမ်းဆိုးမတွေ့၊ မြို့သာသားရေဆိုးမတွေ့ဆိုတဲ့အရပ်မှာ ၆ နှစ် တာဝန်ကျတယ်။ တိုက်နယ်ဆရာဝန်။ မြို့သာဆိုတာ ရေအင်မတန် မကောင်းတာကလား။ မိုးရေကို နှစ်ပါတ်လည် အသုံးခံအောင် လူတရပ်တဖေါင်နက်တဲ့ ကွန်ကရစ်ကန်နဲ့ စုဆောင်း သိုလှောင်ပြီးသုံးရတာ။ ခေါင်းလျှော်ချင်ရင် မိုးရေလေးတပုံးဆွဲသွားမှဖြစ်တာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့သာကို ကျွန်တော် အတော်ချစ်ပါတယ်။ မြို့သာအကြောင်းမမေ့စရာတွေတပုံကြီး၊ ကျွန်တော် တောဆရာဝန်၊ ဂျန်ဂယ်လ်ဒေါက်တာ ဖြစ်စေခဲ့တာ မြို့သာ၊ ကလေးအငယ်ဆုံးနှစ်ယောက်ဖွါးမြင်ခဲ့တာ မြို့သာ။ ရေသာမကောင်းတာ အမှတ်ရစေဘို့ ရေစက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ မြို့သာ အတော်တိုးတက်စီပင်နေပြီတဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ ဆင်းရဲဇာတာပါလို့ အခုလို တိုးတက်နေတာကို အဝေးကနေသာ မုဒိတာပွါးနိုင်ပါတယ်။ ရေလည်းကောင်း၊ လမ်းလည်းကောင်းပြီတဲ့။ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းကြပါစေ။
မင်းရွာက ပုလဲမြို့နယ် တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးရွာ။ သူ့တောင်ဘက်ဆို မြိုင်နယ်ထဲရောက်သွားပြီ။ တိုင်းကလဲ မကွေးတိုင်း ဖြစ်သွားရော။ ပုလဲက စစ်ကိုင်းတိုင်း။ အဲလို မြို့နယ်ရော၊ တိုင်းရော ခြားနေတဲ့နေရာမှာ မွေးခဲ့ရတဲ့ ကျေးဇူးကို နောင်အနှစ် ၄ဝ-၅ဝ ကျမှ သိလာရတာရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးသမား ဝရမ်းပြေးပုန်းရတုံးကပါ။ နယ်ကျော်ပြီး ဟိုကူး၊ ဒီပြောင်း လုပ်နေရင် ပုလိပ်မျက်စိလည်တယ်။ ကျွန်တော် နှစ်ပတ်တိတိ ပုန်းအောင်းနေနိုင်ခဲ့တယ်။ နေရာအတည်တကျမနေပါ။ လွတ်တယ်။
ပုန်းရပြေးရတာက ၁၉၉ဝ နိုဝင်ဘာမှာပါ။ မေလ မကုန်ခင်လေးက ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ခဲ့တာ။ အဲဒါ ဝရမ်းပြေးဖြစ်ဘို့ ဖန်လာတာ။ နောင် ၁ဝ နှစ်ကြာတော့ (အိုင်ပီယူ) ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ လွှတ်တော်အမတ်များ သမဂ္ဂအစည်းအဝေး၊ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အာမန်မြို့တော်ကို သွားပြီး ဗမာပြည်က အမတ်တွေခံနေကြရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေကို အစစ်ခံထွက်ဆိုရတော့ ရွေးကောက်ခံရခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှုမဖြစ်သင့် Being elected should not beaCrime ဆိုတဲ့ ခေါင်းစည်းစာတမ်းရိုက်သွားပြီး လော်ဘီလုပ်ခဲ့ရတယ်။
မင်းတိုင်ပင်ဆိုတာ ကင်းဝန်မင်းကြီးရဲ့ရွာပါ။ အမေက ဦးကောင်းရဲ့ မြေးတော်တယ်။ အရင်က မုံတိုင်ပင်လို့ ရာဇဝင် စာအုပ်တွေမှာ ရေးတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကင်းဝန်ရဲ့အမျိုးဆိုတာကို နဲနဲကြွားဘူးခဲ့တယ်။ ၉ တန်း ၁ဝ တန်း ကဗျာလေး စာလေး စပ်တုံးရေးတုန်းက ကင်းဝန်နွယ် ဘာညာဆိုပြီး ကလောင်နာမယ်ခံယူခဲ့ဘူးတယ်။
နောင် နှစ် ၄ဝ ကျော်တော့ ကယားလူမျိုး တော်လှန်ရေး၊ နိုင်ငံရေး မိတ်ဆွေတွေက အသိအမှတ်ပြုတာကိုတော့ ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ ကယားပြည်ကို သီးခြားပြည်တခုအဖြစ် သီပေါမင်းကိုယ်စား လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ကင်းဝန်မင်းကြီးလို့ ကယား၊ ကယန်းတွေက သူများတွေထက်သိကြတယ်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးကို အဲလို အမြင်ရှိသူတွေ အကဲဖြတ်တာကိုရော၊ ဦးကောင်းလိမ်ထုတ်ဆိုတာပါ၊ အမွေခံရမှာပါပဲ။ ကင်းဝန်မင်းကြီး မွေးနေ့ နှစ် ၁၄ဝ တုံးက ဦးလေးတယောက်ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ မင်းတိုင်ပင်မှာ ပွဲတခုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ကျွန်တော်က ဆေးကျောင်းသားပဲ ရှိသေးတာ။
မနေ့က ကွန်မင့်ကနေ ဦးကောင်းနာမည်ကို ကာတွန်းတခုမှာပါလို့ ကျွန်တော့်ကို ထင်မြင်ချက်ပေးခိုင်းတယ်။ မပေးလိုပါ။ ပေးစရာလည်း မလိုပါလို့သာရေးလိုက်တယ်။ သန်းဝင်းလှိုင်ရေးတဲ့ လူအများစု အမှတ်မှားနေတဲ့ ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်း အကြောင်းကို သမိုင်းအမှန်သိစေချင်မှာ ပိုပြီးစုံစုံလင်လင်ဖတ်ရတယ်။ တောင်သမန်အင်းက လေညှင်းဆော်တော့ထဲမှာ ဆရာမြသန်းတင့် ရေးထားတာကိုတော့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းထက် နှစ်သက်ပါတယ်။
တိုက်နယ်ဆရာဝန်လုပ်ခဲ့စဉ်က ပုလိပ်ရောဂါနဲ့ကြုံရတယ်။ ကာလဝမ်းရောဂါနဲ့လည်းကြုံရတယ်။ မြွေကိုက်လူနာပေါတယ်။ ထန်းလျှောလူနာလည်းများတယ်။ မန္တလေး ဆေးသိုလှောင်ရုံကမရတာကို ဈေးချိုကရတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး တိုလီမုတ်စ ရန်ကုန်လဟာပြင်ဈေးကရတယ်။ ဆိုရှယ်လစ် ငါးနှစ်စီမံကိန်းတွေ အောင်မြင်နေတယ်လို့ ရေဒီယိုကကြားနေရတယ်။ ခုခေတ်တောနယ်ဆရာဝန်တွေ ကြုံနေရာမျိုးကနေတော့ လွတ်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ မဆလဝန်ကြီးတွေကတော့ အောင်မြင်နေတာပဲလို့သာ ပြောကြတယ်။ Smile!
ဓါတ်ပုံ = မြို့သာတုန်းက ကျွန်တေ်ာ့မိသားစု
ကွန်မင့်ကနေ မေးတာ သုံးခု ကနေ့ရတယ်။
၁။ TharThar Lay ဆရာသမီးညီမလေးလက်မှာ အရေကြည်ဘုလေးတွေကနေ လက်မအသားတွေစားနေတယ်ဆရာ ခုဆို ဖ၀ါး နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ ခြေဖ၀ါး နှစ်ဖက်လုံးမှာ အရေကြည်ဘုတွေထနေတယ်ဆရာ ဆေးရုံပြတော့လဲ ဘာမှမပြောဘဲ လိမ်ဆေး သောက်ဘဲပေးလိုက်တယ်ဘာ ဖြစ်မြန်းလဲမသိရဘူးဆရာ ခုဆိုဘုတွေကပိုဆိုးနေလို့ အသက်စိုးရိမ်ရလားဆရာရှင့်
Tint Swe အခုလိုက်ရှာတာ မေးထားတာ တွေ့တယ်။ ဖရင်းမဟုတ်သူတွေကနေ စာရေးရင် ဆရာက မသိနိုင်။ လိုက်ရှာပြီး Accept လုပ်မှာသာ တွေ့တယ်။ အဲလိုတွေလိုက်လုပ်ရတာ တထောင်ကျော်ရှိတယ်။ ခဏနေမှ မေးနည်းစည်းကမ်းပါ အချက်အလက်စုံပါရင် ဖြေပါမယ်။
TharThar Lay ကျေးဇူးပါဆရာ
အဖြေ = ကင်ဆာ မဖြစ်လောက်။ ဘာလဲ သေချာ မသိသေး။ အရည်ကြည်ဖုဆိုတာ ရေယုံကို အရင်စဉ်းစားရ။ ရေယုံက လက်ဖဝါး မပေါက်။ ရိုးရိုးအရေပြားမှာသာပေါင်။ အသက်ကို နောက်မှရေးတာတိုင်း ၂ ခေါက်ဖတ်ရတယ်။
၂။ Nu Nu Winn ဆရာ မက်ဆင်ဂျာကနေမေးထားပါတယ်ရှင့် သုံးရက်လောက်ရှိပါပြီ friမဟုတ်လို့ မဖြေတာလို့ထင်နေတာ အခုမှဆရာ့အခက်အခဲကို သိရလို့ အားနာလိုက်တာ
၃။ Khin Swe Thin ဆရာကိုchat boxကနေကျန်းမာရေးလေးအကြောင်းမေးဖူးတယ် Replyမပြန်ဘူး😢
Tint Swe မေးခွန်း မတွေ့ပါ။ Nu Nu Winn စာလုံးပေါ်နှိပ်ပြီး မက်ဆေ့ဘောက်စ်ကိုရှာတယ်။ တွေ့တယ်။ မေးခွန်းမရှိပါ။
၄။ စိုင်း ဆိုက် စိန် မင်္ဂလာပါ ဆရာ။ messager ကနေ ကျွန်တော် Question ပို့ထားပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဆရာ။
Tint Swe နာမည်ကိုနှိပ်ရှာတယ်။ မက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာ မေးခွန်း မတွေ့။
ဖရင်းမဟုတ်သေးသူတွေကနေ စာရေးရင် ဖစ်လ်တာ မက်ဆေ့ခ်ျလို့ခေါ်သတဲ့။ လိုက်ရှာရသတဲ့။ တွေ့ရင် အဆက်ပ် လုပ်ရသတဲ့။ အဲဒီပညာ တတ်တာမကြာသေး။ သူများတွေကသင်ပေးလို့ သိကတည်းက အားတိုင်းလိုက်လိုက်ရှာတယ်။ နောက်ပြန် တနှစ်စာ တထောင်ကျော်တော့ မောသွားပြီ။ ကျန်နေဦးမယ်။ ဆောရီး။
ကွန်မင့်ကမေးတာကို နာမည်ကိုနှိပ်ရှာပေမယ့် မက်ဆေ့ခ်ျဘောက်စ် မရှိသူတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ မက်ဆင်ဂျာ ထည့်မထားလို့ ထင်တယ်။ သိပ်တော့ မသိပါ။ ဆောရီး။ တချို့ကလည်း အထင်လွဲကြတယ်။ ဆောရီး။